गण्डकी प्रदेश सभामा बहस- भ्रष्टाचारी पार्टी हुन्छ कि व्यक्ति? :: युवराज श्रेष्ठ :: Setopati
गण्डकी प्रदेश सभामा बहस- भ्रष्टाचारी पार्टी हुन्छ कि व्यक्ति?
गण्डकी प्रदेश सभामा अहिले भ्रष्टाचारमाथि बहस चलिरहेको छ। प्रदेश सभाको चैत २५ गतेदेखि शुरु भएको विधान अधिवेसनमा शुरुकै दिन प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले संघीय सरकारले भ्रष्टाचारको काण्डै काण्ड मच्चाएको आरोप लगाएका थिए।
जवाफमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नेपाली काँग्रेस मुलुकको समस्या भएको भन्दै अहिलेसम्म काँग्रेस नेता मात्रै भ्रष्टाचारमा जेल गएको बताएका थिए। उनले काँग्रेस भ्रष्ट पार्टीको आरोपसमेत लगाएका थिए। मुख्यमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिमाथि प्रदेश सभामा सत्तापक्षका सांसदले प्रसंशा गरेका छन् भने विपक्षी आक्रोशित बनेका छन्।
प्रदेश सभामा अहिले ‘प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन’ माथि छलफल भइरहेको छ। तर सांसदको ध्यान भने को भ्रष्टाचारी भन्नेमा केन्द्रित छ। अधिवेसनमा शुक्रबार बोल्दै काँग्रेस नेता कुमार खड्काले मुख्यमन्त्री गुरुङको अभिव्यक्तिप्रति कडा प्रतिवाद जनाए।
उनले अहिलेको सत्तारुढ दल नेकपा एमालेले भ्रष्टाचारीलाई ढाकछोप गरेको समेत आरोप लगाए। अहिलेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल जोडिएको बालुवाटार जग्गा काण्ड जोडेर खड्काले भने, ‘बालुवाटारको जग्गा बेच्नुहुन्छ। त्यो जग्गा लिएर थुनिनुपर्छ भनेर नाबालक छोराको नाममा जग्गा दर्ता गर्नुहुन्छ। यो भन्दा विकृत र निकृष्ट काम के हुन्छ ? नाबालक छोरा जाला जेल ? अनि त्यो जग्गा फिर्ता दिएर भ्रष्टाचारबाट उन्मुक्ति पाउनुहुन्छ।’
खड्का यतिमै सिमित भएनन्। यदि पौडेलले उक्त जग्गा आफ्नो भएको भए राज्यले लिन नमिल्ने उनले तर्क दिए। ‘उहाँ दोषी हो कि निर्दोष, त्यसको व्याख्या अदालतले गर्ला। तर मेरो मनमा उब्जिएको प्रश्न के हो भने उहाँ यदि दोषी हो भने जग्गा फिर्ता दिएर कसरी उन्मुक्ती पाउनुहुन्छ? यदि उहाँँको रगत पसिनाले कमाएको नाबालग छोराको सम्पत्ती हो भने त्यो सम्पत्ती राज्यले कसरी फिर्ता लिन मिल्छ ?’ खड्काले प्रश्न गरे।
खड्काले संघीय सरकारले कारोना महामारीको उपचार गर्न ल्याएका औषधी र अन्य सामाग्रीमा पनि भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाए। उनले भने, ‘ओम्नीको नाममा भ्रष्टाचार भयो। कात्रोमा पनि भ्रष्टाचार भयो भनरे हामीले चर्चा गर्छौ। आज ती मान्छेहरु जेल भन्दा बाहिर छन्। इमान्दार हुन् त? यती होल्डिङ्समा, ७० करोडमा आर्थिक अनियमितता भए। जेलमा छैनन् के तिनीहरु इमान्दार हुन त? आफ्ना पार्टीका कार्यकर्तालाई संरक्षण गने, उनका अपराधलाई उन्मुक्ती दिने अनि हामीले ति मान्छेहरु निदोष हुन्। इमान्दार हुन भन्दै हिड्ने कुराले कति अघि बढ्छौ।’
उनले भ्रष्टाचार पार्टीले नभई व्यक्तीले गर्ने समेत बताए। ‘विष्णु पौडेलजीले गर्नुभएको भ्रष्टाचार सावित भयो भने एमाले पार्टी भ्रष्टाचारी पार्टी भन्दा त्यो भन्दा दुर्भाग्य केही हुन सक्दैन,’ उनले भने। एमाले र काँग्रेस थुप्रै कार्यकर्ता र जनताको रगत र पसिनाले बनेको पार्टी भन्दै उनले व्यक्तिले गरेको भ्रष्टाचार पार्टीसँग जोड्न नहुन बताए।
‘पार्टीलाई भ्रष्ट पार्टी हो भनेर भन्दा के कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई पनि भ्रष्टाचारी भन्ने? मनमोहन अधिकारीलाई पनि भ्रष्टाचारी भन्ने ? तपाईले मदन भण्डारीलाई पनि भ्रष्ट भन्ने? तपाई विपी कोइरालालाई पनि भ्रष्ट भन्ने ? हामी कस्तो मार्गको अनुशरण गर्न लागेका छौ ?’ खड्काले भने।
वाइडबडी प्रकरणमा सत्तापक्षकै नेताले मन्त्रीले भ्रष्टाचार गर्‍यो भनेको समेत उनले बताए। संसदीय छानविन समितिले अख्तियारले कारबाही गर्न भनेको भन्दै उनले कोरोना महामारीका बेला भएका भ्रष्टाचार मानवता विरुद्धको अपराधमा पनि कारबाही हुनुपर्ने बताए।
भ्रष्टाचार काण्डमा व्यक्ति मुछिए पनि काँग्रेस, एमाले वा माओवादी भ्रष्टाचारी हुन नसक्ने खड्काको तर्क छ। सार्वजनिक लेखा समिति गण्डकीका सभापति समेत रहेका खड्काले समस्या भ्रष्टाचार हो भने भ्रष्टाचारी माथि प्रहार गर्नुपर्ने बताए। ‘सिङ्गो रुखमा एक दुई वटा फल कुहियो भन्दैमा रुखलाई दोषी देखाउने प्रवृत्ती गलत छ,’ उनले भने।
मुख्यमन्त्री गुरुङले पञ्चायतकालको ३० बर्ष विपी कोइरालाको कारण गुमेको आरोप लगाएका थिए। उक्त आरोपको जवाफ दिँदै खड्काले भने, ‘१७ सालको काण्डमा विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला दोषी महेन्द्र निर्दोष भन्ने अभिव्यक्ती हामीले केशरजंग रायमाझीबाट सुनेका छौ। मान्य पृथ्वीसुब्बा गुरुङबाट सुन्न पर्दैन।’
केशरजंगपथ को कसले अवलम्बन गरेको छ भन्ने कुरा मात्र रहेको भन्दै उनले भ्रष्टाचारीलाई रोलमोडल मान्न नहुने बताए। ‘विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालालाई, पुष्पलाललाई, मानमोहन अधिकारीलाई, कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई, मदन भण्डारीलाई, शुशील कोइरालालाई रोलमोडल नमान्ने, जयप्रकाश गुप्तालाई, गोविन्दराज जोशीलाई, विष्णु पौडेललाई, ईश्वर पोखरेललाई रोलमोडल मान्ने प्रवृत्तीले राजनीतिलाई सकारात्मक मार्गमा लैजादैन,’ उनले भने।
प्रदेश सभाको प्रारम्भदेखि नै मुख्यमन्त्री गुरुङले शिष्ट र शालिन अभिव्यक्ती दिएको भन्दै खड्काले अहिले आएर उदाङ्गिएको बताए। प्रदेश सरकारबाट माओवादी मन्त्रीद्धय हरिबहादुर चुमान र लेखबहादुर थापाले राजीनामा दिएपछि सत्तारुढ सांसद मन्त्री खान बुर्कुसी मारेको समेत उनले आरोप लगाए।
संघीय सरकार संविधान र पार्टी विधान भन्दा माथि रहेको अभिव्यक्ती दिइरहेको भन्दै खड्काले पाकिस्तानी शासक याइया खाले बोलेका अभिव्यक्ती सम्झिए। उनले भने, ‘पाकिस्तानी शासकले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरे। उनले संविधानका धाराहरु, ऐनका दफाहरु मेरा आदेशसँग बाझिए भने बाझिएका हदसम्म ति खारेज हुन्छन्। केन्द्रको नेतृत्व त्यही दिशामा हिडेको छैन ?’
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, चैत २७, २०७७, २२:५६:००